Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada magaalada Dhuusomareeb iyo Madax ku wajahan | Dhexnimo Media
Home Wararka Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada magaalada Dhuusomareeb iyo Madax ku wajahan
Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada magaalada Dhuusomareeb iyo Madax ku wajahan
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa sheegaya in halkaasi kasocdo diyaar garow ku aadan soo dhaweynta Madaxda maamul goboleedyada dalka oo maanta la filayo in ay gaaraan magaaladaasi.
Madaxtooyada Galmudug ayaa xalay iyo saakay ku mashquul san diyaarinta iyo soo dhaweynta Madaxda maamul goboleedyada dalka iyo wafuuda la socota ee ka qeyb galaya shirka ka furmaya Dhuusomareeb.
Amaanka magaalada Dhuusomareeb ayaana si weyn loo adkeeyay, waxaana ciidamo badan la dhigay qeybo badan oo kamid ah magaalada gaar ahaan Garoonka diyaaradaha iyo inta u dhaxeysa xarunta Madaxtooyada.
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa mudo kadib magaalada Dhuusomareeb ku yeelanaya shir aysan joogin madaxda dowlada federaalka Soomaaliya, waxaana gabo gabada shirka la filayaa in ay soo saaraan War Murtiyeed.
Shirkan ay Dhuusomareeb ku yeelanayaan Madaxda maamul goboleedyada ayaana gogol xaar u ah shir la filayo in ay isugu yimaadaan Madaxda maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka oo looga hadlayo arimo ay kamid yihiin doorashada iyo amaanka.
Previous articleGabar Soomaaliyeed oo cabitaan ay iibsatay loogu dul qoray magaca kooxda ISIS
Next articleMaxaa Qarsoon ee Ethiopia Ka Socda (Warbixin dheer)